Ikati elikhethekile le-Khao Manee | Amakati kaNoti
Ikati le-Khao Manee lingenye yezindawo ezikhethekile kakhulu emhlabeni. Unokubukeka okumnandi kakhulu futhi okukhanyayo ngesikhathi esifanayo. Eqinisweni, yaziwa njengeDiamond Eyes, iRoyal Siam Cat, neWhite Jewel, njengoba amehlo ayo ecwebezela.
Ungathanda ukwazi okwengeziwe ngalolu hlobo oluhle? Ngemuva kwalokho, ungaphuthelwa lokhu okukhethekile lapho sizokutshela khona umlando wayo, izici zayo, ukunakekelwa kwayo nokunye okuningi, nokuningi.
1 Umlando we-Khao Manee
4 Uzinakekela kanjani?
5 Ungaliqeqesha kanjani ikati le-Khao Manee?
Umlando we-Khao Manee
I-protagonist yethu enezinwele inomsuka wayo eThailand, lapho inkosi endala uRama V yazinikela ekubakhuliseni. Kuyisilwane esidonsela ukunakwa okuningi, ngakho-ke ngokushesha saba uhlobo oludume kakhulu ngesikhathi sokubusa kwakhe (1868-1910). Ngaleso sikhathi, wayebizwa nge-Khao Plort, okusho ukuthi "umhlophe ngokuphelele." Futhi umhlophe ngokunembile ungenye yemibala emihle kakhulu isilwane esingaba nayo. Kangangokuthi endaweni lapho badabuka khona kukholakala ukuthi laba abanoboya baheha inhlanhla nenjabulo.
Nokho, lolu hlobo aluzange lushiye iThailand kwaze kwaba ngo-1999, lapho i-American Colleen Freymouth yamukela eyokuqala futhi yayiletha e-United States. Ngakho-ke, kuncane kakhulu okwaziwayo futhi kunzima ukukuthola ukudayiswa, futhi uma kutholakala inani liphezulu njengoba sizobona ngokuhamba kwesikhathi.
I-Khao Manee ikati le-albino laseSiamese elinesisindo esiphakathi kuka-3 no-6kg, umzimba walo onemisipha ovikelwe ijazi lezinwele ezimhlophe ezimsulwa ezimfishane.. Amehlo, okuyingxenye evelele kakhulu kuye, anemibala ehlukene: owodwa uzoba luhlaza okwesibhakabhaka omunye ube nombala ophuzi noma ophuzi. Lezi zimise okweqanda. Imilenze yayo ibanzi futhi iqinile, futhi umsila ubanzi ezansi futhi ubude.
Ngezizathu zofuzo, lezi felines ngokuvamile owazalwa engezwa noma ongezwa ngokwengxenye. Kepha kufanele kuthiwe izithulu kuzinhlobo zakamuva ziyancipha.
Loboya obuncane yisilwane esithandekayo. Kujabulele ukuba nomndeni, ukwamukela ukutotosa kuwo, futhi ngani? Ukuqabula. Uthanda kakhulu ukuba nabanye, futhi uzwana kahle nawo wonke umuntu: izingane nabantu abadala. Unesimo esiphumayo nesinempilo, esimenza abe ngumngani omuhle kakhulu.
I-Khao Manee kusekhaya kakhulu, okusho ukuthi ayinaso leso sidingo esiphoqelela ukuphuma ngaphandle, ngokwesibonelo, ikati laseBengal elingaba nalo. Noma kunjalo, uma ufundiswa ukuhamba ngehhanisiNgokuqinisekile uzoba nesikhathi esihle.
Ngenhloso eyodwa yokugcina impilo enhle, izinwele ezicwebezelayo namazinyo anempilo, Kungakuhle ukuthi umnikeze okuphakelayo (okomile noma okumanzi) okungenazo izinhlamvu. Ezinye izindlela kungukudla kwe-Yum noma kwe-Barf, kepha lokhu kokugcina kufanele kwenziwe ngaphansi kweseluleko sezilwane.
Kuyikati ukuthi kufanele uxubha nsuku zonke, kanye noma kabili, nekhadi ngokwesibonelo. Futhi, ngezikhathi ezithile ungakhetha ukufaka ibhulashi-glavu, ukusizakala futhi ulibhucaze ngenkathi ususa zonke izinwele okungenzeka ukuthi zifile.
Ngokuvamile, iyikati eliphilile impela, kepha uma ucabangela ukuthi luhlobo olungazalwa luyisithulu kubalulekile ukuthi umyise kudokotela wezilwane ayohlolwa futhi ngikutshele ukuthi kufanele wenze kanjani uma kunjalo.
Ungaliqeqesha kanjani ikati le-Khao Manee?
I-Khao Manee iyikati elizolile, elinomlingiswa olinganiselayo, ngakho-ke, ngeke kube nzima kuwe ukumfundisa. Ngalokho, kufanele ubekezele, futhi ngaphezu kwakho konke ungalokothi ulahle inhlonipho ngaye. Ngesikhathi sobusha bakhe angaba ngumuntu ongalawuleki, ngakho-ke kuzofanele uphinde izinto kaningana.
Isibonelo, ukumfundisa ukuthi angaluma, iqhinga elilula kepha elisebenzayo (yize kuthatha isikhathi ukuthi afunde) yilokhu okulandelayo:
Uma ubona ukuthi uzokuluma, masinyane mkhombise intambo, isilwane esigxishiwe, noma yini angayiluma.
Futhi udlale ngayo isikhashana.
Uma sebevele bakulume, gcina isandla noma unyawo lwakho kunganyakazi. Ngakho-ke uzoyidedela. Bese umsuse kusofa ungamnaki aze ehlise umoya.
Maduze uzohlanganisa ukuluma 'nokungenzi lutho', okuthile okuzomcasula futhi uzozama ukukugwema ngokunembile ngokungakulimazi.
Yebo, Kubaluleke kakhulu ukuthi lapho uxhumana naye ungenzi ukunyakaza okungazelelwe. Yiba nobuqili. Ungamphoqi ukuba enze noma yini angayifuni ngoba uma kungenjalo ngeke abe yikati elijabulayo, okuphambene nalokho.
I-Khao Manee wuhlobo olubizayo, olungenye yezinto ezinkulu kakhulu. Ngakho-ke, akufanele kukumangaze ukuthi esithenjini sezinja eziqeqeshiwe bakucela okuthile I-6000 euro okomdlwane.
Uma ufuna ukubona izithombe eziningi zalesi silwane esihle, jabulela lezo esikushiyela zona ngezansi:
Isithombe - Purrfectcatbreeds.com
Isithombe - Pets4homes.co.uk
Indlela ephelele ye-athikili: Amakati kaNoti » Amakati » Ikati elihle i-Khao Manee
U-Adrian mancera kusho
kuqokonyiswe kahle kepha ngicabanga ukuthi amanye amakati e-Khao Manee anombala wamehlo aluhlaza ngokwengeziwe, kepha ngenye indlela kahle kakhulu.
Ngangicabanga ukuthi ukunakekelwa kwakhe kukhonjiswe kahle futhi nezithombe zazizinhle kakhulu ngendlela
Kepha ngifuna ukwazi ukuthi ngazi kanjani ukuthi imsulwa kakhulu yini, ngamanye amazwi ukuthi isizukulwane sangempela, ngicabange nokuthi kunesidingo sokubeka izincomo ezithile ukuze ngikwazi ukuthenga amakati.
Phendula u-Adrian Mancera
Ikhadi lokondla amakati alahlekile?